Naqshadeeyayaasha Qalabka Guriga ee Shiinaha Soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | Meesha
Naqshadaynta qalabka guriga waa in lagu horumariyo muuqaalka iyo gudaha gudaha qalabka guryaha. Waxaa ka mid ah nashqadda qaybo caag ah iyo qaybo bir ah.
Maalmahan, shuruudaha dadka ee qalabka guryaha ma aha oo kaliya shaqooyinka, laakiin sidoo kale shuruudaha sharraxaadda ee muuqaalka gaarka ah, shakhsi ahaaneed iyo farshaxan.
Naqshadaynta qalabka korontada ee guryaha waxay ku saleysan tahay balaastig iyo walxo bir ah, oo ay weheliso fikradda qurxinta dadka iyo qaab dhismeedka wax soo saarka, iyadoo la adeegsanayo barnaamijka 3D ee naqshadeynta si loo qaabeeyo muuqaalka iyo qaab dhismeedka sheyga, iyo ugu dambeyn sawirrada wax soo saarka ee wax soo saarka caaryada iyo qaybaha
Mestech waxay siisaa macaamiisha qaabeynta soosaarka elektaroonigga ah ee soo socda iyo soosaarka:
(1) Qalabka guryaha ee shaqsi ahaaneed: inta badan oo ay ka mid yihiin timo qalajiyaha, xiirista korontada, madaxa birta korontada, cadayga korontada, qalabka quruxda elektarooniga ah, masaajidka elektarooniga ah, iwm.
(2) Adeegsiga shakhsi ahaaneed ee alaabada dhijitaalka ah: badanaa kombiyuutarada kiniiniga, qaamuusyada elektarooniga ah, mashiinnada barashada timirta, makiinadaha ciyaarta, kamaradaha dhijitaalka ah, wax soo saarka waxbarashada carruurta, iwm.
(3) Qalabka guriga: inta badan oo ay ku jiraan maqalka, kululeeyaha korontada, qoyaan, hawo sifeeye, biyo qaybiyaha, gambaleelka albaabka, iwm.
Naqshadeynta alaabta elektarooniga ah ee guriga
Qalabka ciyaarta Palm
Mashiinka barashada codka carruurta
Mashruuca dijitaalka qoyska
Nadiifiyaha aaladda Robotikada
Miisaanka elektarooniga ah
Qaababka naqshadeynta qalabka elektaroonigga ah ee guryaha
Naqshadaynta qalabka elektaroonigga ah ee guryaha waa naqshadda muuqaalka, naqshadda guud iyo qaabaynta qaybo gaar ah. Si ka duwan qalabka warshadaha,
(1) Carrabka ku adkee naqshadda muuqaalka muuqaalka, astaamaha iyo shaqsi ahaaneed.
(2) .Kibir khibrada isticmaaleyaasha. Sida hawlgal raaxo leh, oo si sahlan loo qaadi karo, biyaha oo biyuhu galaan.
(3) .Diirad saarida cabirka, mugga iyo culeyska qeybta wax soo saarka.
(4) .Caadi ahaan ku qurxiso muuqaalka alaabada 'iyadoo la adeegsanayo qalabka wax lagu qoro, electroplating, rinjiyeynta, shaashadda xariirta iyo geedi socodka kale ee daaweynta.
Xiriirka maalinlaha ah ee jirka bini'aadamka awgood, qalabka elektaroonigga ah ee guryaha ayaa leh shuruudo amni oo adag
(1). qalabka la isticmaalay waxyeello kuma laha jirka aadanaha Waxaa jira saddex nooc oo ah heerarka RoHS, gaadho iyo 3C ee Shiinaha. Maaddooyinka waxyeellada leh ee ku jira heerarka qaybaha wax soo saarka
(2) Shucaaca elektromagnetic-ka waa inuusan ka sarreynin heerka amniga ee jirka bini-aadamka aqbalo Electromagnetic shucaacu wuxuu saameyn ku yeelan karaa caafimaadka dadka. Waxyaabaha elektarooniga ah, gaar ahaan alaabada isgaarsiinta ee ku tiirsan calaamadaha wireless, waxay soo saari doonaan shucaaca elektromagnetic. Naqshadeynta alaabooyinka noocaas ah, waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo qiimaha shucaaca elektromagnetic-ka illaa heer ammaan ah.
(3) Dahaarka korantada: qaar ka mid ah qalabka guryaha oo leh danab sare oo shaqeynaya (AC), ka hortagga daadashada, dahaarka ama naqshadeynta biyuhu waa in lagu sameeyaa naqshadeynta alaabta si looga fogaado shilalka amniga.
Mestech waxay siisaa macaamiisha naqshadeynta OEM, wax soo saarka caaryada, soosaarka qaybaha iyo isu imaatinka alaabada elektaroonigga ah ee caadiga ah. Waxaan rajeyneynaa in macaamiisha u baahan inay nala soo xiriiraan, waxaan ku siin doonaa adeeggayaga ugu fiican.
Hore: Naqshadaynta guryaha elektarooniga ah
Xiga: Naqshadeynta alaabta caaga ah
Xarkaha caagga ah ee fiilada iyo siligga